Rakaabka ku jira Imtixaanka Buuxa ee Tallaalka Kariibiyaanka Royal Caribbean wuxuu u wanaagsan yahay COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » saaciday inay » Rakaabka ku jira Imtixaanka Buuxa ee Tallaalka Kariibiyaanka Royal Caribbean wuxuu u wanaagsan yahay COVID-19
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • saaciday inay • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Raaxada • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Afar qof oo qaangaar ah oo la tallaalay iyo laba carruur ah oo aan la tallaalin ayaa laga helay COVID-19 oo saaran doonta Royal Caribbean Adventure of the Seas.
Lix Adventure of the Seas rakaabka ayaa laga helay cudurka loo yaqaan coronavirus.
Lix kiis ayaa la ogaaday kadib markii rakaabka la siiyay baaritaano deg deg ah.
Rakaabka uu cudurku ku dhacay ayaa laga daadgureyn doonaa markabka oo loo duuli doonaa guryahooda.
Kooxda Royal Caribbean ayaa maanta ku dhawaaqday in lix rakaab ah oo saarnaa markabkii dalxiiska ee Royal Caribbean International ee Badweynta Seas ay tijaabiyeen togan COVID-19 intii lagu guda jiray tijaabadii safarka kadib.
Afar qof oo qaangaar ah oo la tallaalay oo si gooni gooni ah u socdaalay ayaa laga helay cudurka togan iyo sidoo kale laba carruur ah oo aan la tallaalin oo isku xisbi ahaa. Rakaabkii tijaabiyey togan, saddex ka mid ah dadka waaweyn waxay ahaayeen asymptomatic, sidoo kale labaduba carruurta, halka mid ka mid ah dadka waaweyn uu lahaa astaamo khafiif ah.
Af-hayeenka Royal Caribbean Lyan Sierra-Caro ayaa sheegay in tijaabooyinka togan ay qayb ka ahaayeen tijaabooyinkii caadiga ahaa ee la qaaday dhammaadkii safarka si rakaabku u soo saaraan caddayn tijaabooyin taban oo looga baahan yahay inay guryahooda ku noqdaan.
Lixda kiis ayaa la ogaaday ka dib markii rakaabka la siiyay baaritaano deg deg ah, baaritaankii PCR ee ku xigay ayaa la xaqiijiyay inay ka heleen fayraska COVID-19.
Ka dib markii laga helay cudurka COVID-19, martida cudurka qabta ayaa isla markiiba la karantiimay oo dhinacyadooda safarka iyo dhammaan xiriirada dhow ayaa la baaray oo la tijaabiyey diidmo, shirkadda ayaa tiri.
Royal Caribbean ayaa sheegtay in lixda qof ee rakaabka ah caafimaad ahaan looga soo daadgureyn doono markabka oo ay diyaarad khaas ah ku qaadi doonaan gurigooda oo ay bixinayso shirkadda.
Markabka dalxiiska ayaa hadda ku xiran Freeport, Bahamas.
Socdaalka Badweynta ee badda, oo ka soo shiraacday Nassau ee Bahamas bishii Luulyo 24 -keedii, ayaa looga baahan yahay dhammaan dadka socotada ah ee jira 16 ama ka weyn in si buuxda loo tallaalo oo loo tijaabiyo diidmo kahor intaan la fuulin. Kuwa aan u qalmin tallaalka waa inay muujiyaan natiijo tijaabo oo xun si ay u safraan.
Dee Brummett wuxuu leeyahay,
Ogosto 13, 2021 markay tahay 06:08
Arrin noocee ah ayuu qofku u baahan yahay si uu ugu qalmo in aan la tallaalin?